किन आधारभूत वेब स्क्रैपरको रूपमा Google पानाहरू प्रयोग गर्दछन्? - Semalt उत्तर
Google Docs वा Google Sheets वेब आधारित सफ्टवेयर हो।. यी एपहरू धेरै Microsoft Office ढाँचासँग मिल्दो छ र सजिलैसँग विभिन्न वेब पेज स्क्रैप गर्न मद्दत गर्दछ. तपाईं Google पानाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र फाइलहरूमा नेट सम्पादन गर्नुहोस् र वास्तविक समयमा डेटा प्राप्त गर्न. गुगल पानाहरू र Google Docs ले उनीहरूको सादगी, लगातार उत्पादन अद्यावधिकहरू र विश्वसनीय परिणामहरूको लागि प्रशंसा प्राप्त गरेको छ. यदि तपाईं Google (Sheets) मा Google एक स्क्रैप निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ केहि सरल चरणहरू पछ्याउन आवश्यक छ।.
पहिलो चरण स्प्रिडसिटमा यूआरएल प्रतिलिपि गर्न हो।.
दोस्रो चरणमा, तपाईले साइटमा नेभिगेट गर्नुहुनेछ, लेखकको इनलाइनमा होभर गर्नुहोस् र मेनु ल्याउन दायाँ क्लिक गर्नुहोस्।.
तेस्रो, तपाइँ निरीक्षण तत्व विकल्पमा क्लिक गर्नुहुनेछ।. यसले एक निरीक्षण विन्डो तुरुन्तै देखाउनेछ जहाँ तपाईं HTML तत्वहरू निरीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ.
अर्को कदम विकासकर्ता कन्सोल सञ्झ्यालमा एक विशेष कोड सम्मिलित गर्न छ।. तपाईं आफ्नो काम प्राप्त गर्न Google पानाहरूको आयात-XML प्रकार्यहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
Google पानाहरूको प्रमुख लाभहरू:
1. कीबोर्ड शर्टकट
तपाईंको काम कम गर्न विभिन्न कुञ्जीपाटी सर्टकटहरू छन्. Google पानाहरूसँग, तपाइँ सजिलै केही सर्टकटहरू याद गर्न सक्नुहुन्छ र तुरुन्तै विभिन्न कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ. उदाहरणका लागि, Ctrl + C विभिन्न वेब पृष्ठहरूबाट पाठ प्रतिलिपि गर्न प्रयोग गरिन्छ, र यो पाठ सादा कागजातमा टाँस्नको लागि Ctrl + V प्रयोग गरिन्छ।.
2. फारामहरू र सर्वेक्षणहरू
तपाई सजिलैसँग अनलाइन पाना र Google पानाहरूसँग सर्वेक्षणहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ. यो वेबमास्टरहरू र फ्रिक्वेन्सरहरूको लागि उपयोगी छ जुन तिनीहरूका ग्राहकहरूबाट प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न चाहन्छ.
3. स्क्रैप र वेब सामग्री बचत गर्नुहोस्
Google पानाहरूको प्रमुख फाईदाहरूमध्ये एउटा हो कि तपाईं सजिलै संग वेब सामग्री स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्छ. यो उद्यम र प्रोग्रामरहरूको लागि उपयुक्त छ र तिनीहरूलाई पढ्न योग्य र स्केलेबल ढाँचामा वेब सामग्री बचत गर्न मद्दत गर्दछ. तपाइँ अफलाइन प्रयोगका लागि फाईलहरू सिधा हार्ड डिस्कमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ.
Google पानाहरू सबै अपरेटिङ सिस्टम र कम्प्यूटर र मोबाइल उपकरणहरूसँग मिल्दो छन्. तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो जीमेल खाता संग एकीकृत गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गर्न र धेरै फाईलहरू बचत गर्न सक्नुहुन्छ. Google पानाहरू डिजिटल बजारका लागि एकदम सही छन् र उनीहरूलाई थुप्रै कार्यहरू पूरा गर्न मद्दत गर्दछ.
5. कुराकानी गर्दा कुराकानी गर्नुहोस्
मित्रहरूसँग सहयोग गर्ने क्षमता Google पानाहरूको प्राथमिक लाभ हो. तपाईँका वेब कागजातहरू हेर्दा वा नेटमा सामग्री स्क्रैप गर्दा साथीहरूसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं आफ्नो ग्राहकहरुसँग सम्पर्कमा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र देखाउनुहोस्. यसका लागि, तपाईंले च्याट सेक्शनको तीरमा क्लिक गर्नुपर्छ र वास्तविक-समय छलफलहरूको आनन्द लिनु पर्छ.
6. Google पानाहरू गैजेट्स
Google भिजुअल एपिआई एपिड ग्याजेट ग्यालेरीमा एकदम धेरै ग्याजेटहरू छन्. तपाईं सकेसम्म धेरै ग्याजेटहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंका कार्यहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं एक लगानी बैंकर वा व्यापारी हुनुहुन्छ? Google वित्तले नेटमा विभिन्न कार्यहरू प्रदर्शन गर्न मद्दत गर्नेछ. तपाईं सजिलै संग हालको लगानीलाई ट्रयाक गर्न सक्नुहुन्छ र ऐतिहासिक डेटा समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ. गुगल स्प्रिेडसिटको साथ, तपाईं कुनैपनि फाईल हेर्न र खोल्न सक्नुहुनेछ. xls, doc,. अजीब,. xlsx, ppt, र अन्य Source .